10 युरोपमा आश्चर्यजनक स्टपहरू | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
घर > यात्रा युरोप > 10 युरोपमा आश्चर्यजनक स्टपहरू
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 31/12/2021)
प्राकृतिक दृश्य, रहस्यमय गाउँहरू, महलहरू टाँसिए, र असामान्य घरहरू, यी 10 युरोपमा अचम्मको स्टपहरू तपाईंको बसाइलाई लम्ब्याउन आवश्यक हुन सक्छ, तर तिनीहरू पूर्ण रूपमा भ्रमणको लायक छन्.
1. युरोपमा आश्चर्यजनक स्टपहरू: राकोट्जब्रुक, जर्मनी
सक्सोनीको सानो पार्कमा लुकेको छ, शैतानको पुल, Rakotzbrucke को रूपमा पनि चिनिन्छ, बर्लिनबाट चुनौतीपूर्ण यात्राको लागि पूर्ण रूपमा लायक छ. बाट सर्पिल चट्टानी पुल 1860, यो एक दृश्य हो जुन यसको अद्वितीय आकार र निर्माणको लागि यात्रुहरूलाई चासो र मोहित बनाउँछ. प्रत्येक छेउमा तीखा स्पियरहरू र धेरै घुमाउरो पुल, तिनीहरू शैतान आफैले बनाएको हुन सक्छ जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा सबै मानव निर्मित.
यसबाहेक, कथाहरू भन्छन् कि मानिसहरूले यस पुललाई शैतानको प्रस्तावको रूपमा बनाउँछन्, तर आज यो केवल एक जादुई ठाउँ हो. नजिकै गर्न धेरै चीजहरू छैनन्, त्यसैले राकोट्जब्रुकको भ्रमणलाई क्रोमलाउ पार्कको यात्रासँग जोड्नु उत्तम हुन्छ।.
2. शैम्पेन-आर्डेन, फ्रान्स
रमणीय उपत्यकाहरू र दाखबारी र सेतो रक्सीको अन्तहीन क्षितिज. त्यसैले, Champagne-Ardenne को भ्रमण तपाईंको इटालियन यात्रा मा एक अद्भुत स्टप हुन सक्छ रक्सी क्षेत्र, टस्क्यानी. शैम्पेन देश पेरिस र लोरेनको बीचमा अवस्थित छ. त्यसैले, एक मा एक रोक Champagne-Ardenne मा महान दाखबारी एक मा एक भयानक थप हुन सक्छ केटीहरु’ यात्रा पेरिस गर्न.
थप रूपमा, विलासी स्पार्कलिंग शैम्पेनको घर हुनु, यस क्षेत्रको ठूलो ऐतिहासिक महत्व छ. उदाहरणका लागि, अचम्मको जोन अफ आर्क गाउँ डोमरेमीबाट आएको थियो. त्यसैले, रमणीय फ्रान्सेली दाखबारीमा वाइन चाख्दा तपाईले अचम्मका कथाहरू सुन्नुहुनेछ. तल लाइन, Champagne-Ardenne मध्ये एक हो5फ्रान्समा सबैभन्दा अचम्मको स्टपहरू.
3. युरोपमा आश्चर्यजनक स्टपहरू: Oberhofen महल, स्विट्जरल्याण्ड
को किनारमा सुन्दर ताल लोचदार, Oberhofen Castle स्विट्जरल्याण्ड मा भव्य महल मध्ये एक हो. Oberhofen महल बर्न बीच स्थित छ, इंटरलेकन, र लेक लुसर्न. त्यसैले, ओबरहोफेन क्यासल र थुन तालको भ्रमण लामो सुन्दर सडकमा एक अद्भुत रोकिने बिन्दु हो.
साथै, महलमा परिणत भएको संग्रहालय जुन 13 औं शताब्दीको हो, त्यहाँ एक अद्भुत बगैचा छ जहाँ तपाईं धेरै विदेशी रूखहरूको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ।, फूलहरू, र आल्प्सको दृश्यहरू. यसरी, तपाईं आधा-दिनको यात्रालाई ओबरहोफेनको पूरा-दिनको यात्रामा बदल्न सक्नुहुन्छ, र नजिकैको सुन्दर पार्क शान्त निर्मलता र प्राकृतिक दृश्यहरू अनुभव गर्न, जब भीडहरू लुसर्नमा हतारिन्छन्.
4. Vorarlberg, अस्ट्रिया
सुन्दर ताल Constance लाई हेरेर, Vorarlberg यसको महाकाव्य ताल र पहाड दृश्यहरूको लागि प्रसिद्ध छ. अस्ट्रियाको सहर Vorarlberg को फेदमा छ, एक भव्य प्रकृति रिजर्व ठूला पहाडहरूको, र हरियो ट्रेल्स. चाहे तपाईं लिकटेन्स्टाइन देखि अस्ट्रिया वा जर्मनी यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, Vorarlberg एक अद्भुत स्टप हो आफ्नो रेल यात्रा मा यूरोप भर.
पहाडी नाश्ता, वा व्यस्त शहर अघि प्रकृति मा एक शान्त सप्ताहन्त, तपाईंले Vorarlberg को लागि समय बनाउनु पर्छ. यो शहर यात्रुहरु माझ धेरै चिनिन्छ, यद्यपि, Vorarlberg जहाँ तपाईं अस्ट्रियाली संस्कृति र व्यञ्जन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ. यसबाहेक, तपाईं सबैभन्दा रोमाञ्चक अस्ट्रिया परिदृश्य द्वारा घेरिएको हुनेछ, गाउँमा, र प्राकृतिक दृश्य – धेरै राम्रो अस्ट्रियाले प्रस्ताव गरेको छ, पर्यटकीय स्थलहरूबाट टाढा.
5. युरोपमा आश्चर्यजनक स्टपहरू: फ्रुडेनबर्ग, जर्मनी
मनमोहक मध्ययुगीन फ्रुडेनबर्ग शहर जर्मनीको एक हो, र युरोपको सबैभन्दा रमणीय शहरहरू. यहाँको मुख्य आकर्षण हो 80 वा यति काठको फ्रेम गरिएको सेतो घरहरू, जाडोमा विशेष गरी सुन्दर देखिन्छ. यसरी, हिउँले ढाकिएको फ्रुडेनबर्गको यात्रा एउटा हो अविस्मरणीय अनुभव, एक जसले तपाईंलाई समय र परी कथाहरूको भूमिमा फिर्ता लैजान्छ.
यसबाहेक, फ्रुडेनबर्ग हरियो पहाडको बीचमा अवस्थित छ, संग 160 किमी को पैदल यात्रा ट्रेल्स र महान दृष्टिकोण. वेस्टफालिया क्षेत्र वसन्तको समयमा मनमोहक हुन्छ जब सबै हरियो र खिलिएको हुन्छ. द6बर्लिनबाट घण्टाको रेल यात्रा यसको लायक छ, foraglimpse of one of the most आकर्षक पुराना शहरहरू जर्मनीमा.
6. विशाल कोजवे, उत्तरी आयरल्याण्ड
माथिको दृश्यहरू 40,000 विशालकाय कोजवेमा नीलो महासागरमा झर्ने हेक्सागोनल बेसाल्ट स्तम्भहरू एकदम रमणीय छन्. प्राकृतिक चमत्कारहरू 6o मिलियन वर्ष भन्दा पुराना छन्, हरियो मार्फत पुग्न सकिन्छ, रातो, र निलो ट्रेल्स. तिनीहरूको अद्वितीय आकारको लागि, यी स्तम्भहरूले Giant's Causeway लाई सहीसँग राख्छन्7अन्य विश्व आश्चर्य.
त्यसैले, यो भन्न आवश्यक छैन, विशालकाय कोजवे मध्ये एक हो 10 आयरल्याण्डमा बनाउनको लागि सबैभन्दा अचम्मको स्टपहरू. चाहे तपाईं बेलफास्ट वा डब्लिनबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, यो गर्न समय बनाउनुहोस् अद्भुत दिन यात्रा उत्तरी आयरल्याण्ड मा. हरियो हरियो आयरिश परिदृश्यले घेरिएको, र यसको खुट्टामा निलो महासागर, यी ज्वालामुखी स्तम्भहरूको साथमा प्रत्येक चरणले तपाईंलाई पृथ्वीमा सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा उल्लेखनीय पत्ता लगाउनको लागि तपाईंको यात्रामा नजिक ल्याउनेछ।.
7. युरोपमा आश्चर्यजनक स्टपहरू: जर्मेट, स्विट्जरल्याण्ड
महान आल्प्स यति विशाल छ कि तपाईंले रोक्नको लागि छनौट गर्नुभएको कुनै पनि बिन्दुले तपाईंको सास टाढा लैजान्छ. यद्यपि, को अचम्मको दृश्य जस्तो केहि छैन स्विस आल्प्स Zermatt मा. जबकि Zermatt यसको भयानक स्कीइङ ढलान को लागी लोकप्रिय छ, यो वसन्त र गर्मीमा सुन्दर देखिन्छ.
Zermatt एक को घर हो युरोप मा सबै भन्दा रमणीय पर्वत श्रृंखला, Matterhorn. जबकि यो भव्य र पुग्न टाढा देखिन्छ, जरमेटको सुन्दरता बासेलबाट टाढाको रेल यात्रा हो, बर्न, र जेनेभा. त्यसैले, तपाईं एक सप्ताहन्तको लागि आउन सक्नुहुन्छ वा स्विस आल्प्समा अविस्मरणीय छुट्टीको लागि आफ्नो छोटो स्टप लम्ब्याउन सक्नुहुन्छ.
8. अल्बेरोबेलो इटाली
तपाईं असामान्य Trulli द्वारा मोहित हुनुहुनेछ, आश्चर्यजनक Salento क्षेत्रमा. सेतो अनुहार र सजाइएको छानासहितको कोनिकल घरहरू कांस्य युगका हुन्. यी अनौठो भवनहरू अस्थायी हुनुपर्दछ, तर धेरै समय र मौसम बाँचेका छन्, प्यारा Alberobello शहर मा. अल्बेरोबेलो दक्षिणी इटालीको सबैभन्दा सुन्दर शहरहरू मध्ये एक हो, र इटालियन तटवर्ती किनारमा उत्कृष्ट स्टप.
जबकि यो सहर सानो छ, तपाईं सजिलैसँग क्षेत्रीय रेलहरू द्वारा Alberobello र Trulli क्षेत्रमा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ. यो बाटो, तपाईं अन्य आकर्षक शहरहरूमा केही थप स्टपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, पुरातन Lecce जस्तै, समुद्री किनार बारी, र Trani. साथै, यी भव्य शहरहरू थोरै छन् अफ-द पिट्ने-मार्ग इटालीमा र पर्यटक भीडबाट मुक्त.
9. युरोपमा आश्चर्यजनक स्टपहरू: Beaulieu-Sur-Mer गाउँ फ्रान्स
मोनाको र नाइस बीच, आश्चर्यजनक फ्रान्सेली रिभिएरा मा, Beaulieu-sur-Mer समुद्रको किनारमा रोकिने र भूमध्यसागरमा स्फूर्तिदायी डुब्नका लागि हाम फाल्ने उत्कृष्ट ठाउँ हो।. निजी समुद्र तटहरू, विलासी विलाहरू, र सेन्ट-जीन-क्याप-फेराट प्रायद्वीपको उत्कृष्ट दृश्यहरू, यो युरोप मा यो भन्दा कुनै सपना मिल्दैन.
Beaulieu-sur-Mer को अतिरिक्त, Les Corniches को साथमा धेरै लुकाउने स्टपहरू छन्, फ्रान्सेली रिभिएराको साथमा चट्टानहरू सडकहरू. ३० किलोमिटर ड्राइभ नाइसमा सुरु हुन्छ र मेन्टोनमा समाप्त हुन्छ, मध्येको एउटा युरोपमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरू. जबकि यो केवल 30 किलोमिटर छ, त्यहाँ कम्तिमा छन् 10 युरोपको यो रमणीय सडकमा अचम्मको स्टपहरू.
10. Giethoorn, नेदरल्यान्ड्स
खरानी फार्महाउसहरूको जग्गा र 170 द्वीप, Giethoorn isaरहस्यमय गाउँ नेदरल्यान्ड मा. यसबाहेक, नहर संगै लिएर, काठका पुलहरू मुनि, हरियो जमिन र फूलहरूले घेरिएको, तपाईंले कहिल्यै बिर्सनुहुने छैन भन्ने अनुभव हो.
मा आकर्षक सानो Giethourn गाउँ राष्ट्रिय निकुञ्ज Weerribben-Wieden हल्याण्ड भरि एक यात्रा मा एक अद्भुत स्टप हो. जबकि यो सानो गाउँ 18 औं शताब्दीमा जमेको छ, आधुनिक को लागी धन्यवाद सार्वजनिक यातायात, तपाईं अब एम्स्टर्डमबाट कममा Giethoorn पुग्न सक्नुहुन्छ2घण्टा.
हामी मा एक ट्रेन बचत गर्नुहोस् तपाइँ यी को लागी एक यात्रा को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछ 10 युरोपमा अचम्मको स्टपहरू.
के तपाइँ हाम्रो ब्लग पोष्ट "युरोपमा 10 आश्चर्यजनक स्टपहरू" तपाइँको साइटमा इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Famazing-stops-europe%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
AmazingStops	amazingstopseurope	बन्द	StopsInEurope	यात्रा गर्दै